KENYA Oo Saraakiil Culus U Soo Dirtay Gobaladda Waqooyi » Axadle Wararka Maanta
KENYA oo saraakiil culus u soo dirtay Gobaladda Waqooyi
Nairobi (Axadle) – Dowladda Kenya ayaa saraakiil culus oo ka shaqeynaya xafiiskeeda Gobaladda Waqooyi u soo dirtay magaalada Hargeysa ee Caasimadda Gobaladda Waqooyi.
Saraakiishan ayaa kala ah Benson Mwaliko oo ah madaxa xafiiska xiriirka, Charles K Waichari oo ah la -taliyaha Labaad iyo Grace Musau iyo Ronald Nyakweba oo ah Ku -xigeennada maamulka, sid ku cad warqad ay Kenya u soo dirtay labadii bishan Gobaladda Waqooyi.
Arrintan ayaa qeyb ka ah is afgaradkii ay sanad ka hor gaareen labada dhinac oo ahaa inay yeeshaan iskaashi dhinacyo kala duwan leh, si xoojiyo xiriirka Kenya & Gobaladda Waqooyi.
Si kastaba madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Gobaladda Waqooyi, Muuse Biixi Cabdi, oo daba-yaaqadii sanadkii la soo dhaafay ku kulmay Nairobi ayaa waxay hoosta ka xariiqeen afar arrimood oo waqti cayiman lagu dhaqaaqayo, si loo muujiyo saameynta wadashaqeynta.
In Kenya ay qunsuliyad ka furato magaalada Hargeysa ilaa dhammaadka bisha March ee sanadka 2021-ka. Muddadaas gudaheedana Gobaladda Waqooyi waxay sii horumarineysaa howlaha xafiiskeeda Nairobi.
In saraakiisha sar sare ee Kenya iyo Gobaladda Waqooyi ay isku waafaqaan xogta iyo waqtiga la hirgalinayo barnaamijyo isweydaarsi ah oo lagu hormarrinayo Xirfadleyda beeraha, Ardayda, Dhakhaatiirta, kalkaaliyeyaasha iyo xirfadleyaasha kale.